"Fa samy fantatra amin’ny voany avy ny hazo rehetra." Lioka 6:44
"… mba handehananareo mendrika ny Tompo, hanaovana ny sitrapony amin’ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin’ny asa tsara rehetra." Kolosiana 1:10
Ny fomba tsotra indrindra ahafantarana hazo iray, dia ny mijery ny voa omeny. Na ankizy kely aza no mahita hazo rakotra paoma, dia hahafantatra fa hazo paoma io. Te hiteny amintsika amin’ny alalan’izany sary izany ny Tompo, Izay matetika no mampiasa zavatra tsotra eo amin’ny voary, mba hampahatakatra ny zava-misy eo amin’ny ara-panahy.
Raha nandray ny famonjena natolotr’i Kristy teo amin’ny hazofijaliana aho, raha nandray ny famelan-keloka sy ny fiainana mandrakizay, dia tokony ho hita izany eo amin’ny fitondrantenako sy amin’ny karazan’olona ifandraisako. Ireo zavatra ataoko, ireo fihetsiko, ireo teniko dia hifanaraka amin’ny toetra maha kristiana ahy, ho araka ilay aina vaovao nomen’Andriamanitra ahy. “Izaho … haneho aminao ny finoako amin’ny asako” (Jakoba 2:18). Aoka isika tsy ho mora fitahina, na momba ny hafa, na indrindra momba ny tenantsika. Aoka hijery ny voa, fa tsy hianina amin’ny endrika ivelany. Taomin’Andriamanitra ny zanany hampiseho vokatra azo tsapain-tanana avy amin’ny ain’Andriamanitra ao anatiny, hampiaraka amin’ny finoana ny fahatanjahan-tsaina, ny fahalalana, ny fahononam-po, ny faharetana, ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, ny fitiavana ny rahalahy, ny fitiavana ny olona rehetra. Aoka hangataka aminy ny hery ahafahantsika mamoa toy izany. Hoy koa ny Tenin’Andriamanitra : “Fa raha anananareo izany zavatra izany, sady anananareo betsaka, dia tsy avelan’izany ho malaina na tsy hahavokatra ianareo” (2 Petera 1:5-8).
Fantatry ny mpamboly fa ny hatsaran’ny voankazo dia avy amin’ny tanjaky ny hazo, izay tokony homena sakafo, arovana, rantsanana, raha te hahazo voankazo tsara. Izany no tian’ny Tompo hotanterahina ao amin’ny olona tsirairay navotany. Aoka hifikitra mafy aminy, dia hamokatra voa manome voninahitra Azy (Jaona 15:2,5).